Lionel Messi iyo Paul Pogba oo Jimcihii ku shiray Imaaraadka Carabta iyo shaki Cusub oo dhashay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Lionel Messi iyo Paul Pogba oo Jimcihii ku shiray Imaaraadka Carabta iyo shaki Cusub oo dhashay
(17-11-2018) Magaalada Dubai waxa shalay ka dhacay kulan shaki abuuray oo dhex maray xiddiga Manchester United ee Paul Pogba iyo kabtanka kooxda Barcelona, Lionel Messi, kuwaas oo waqti ku wada qaatay halkaas.
Lama sheegin waxa ay labada ciyaartoy ka wada hadleen, hase yeeshee Pogba oo dhaawac kaga maqnaa ciyaartii xalay dalkiisa France 2-0 lagaga adkaaday ee guushu ku raacday Holland, ayaa waxa uu safar ku tegay magaalada Dubai xilli ay ciyaartooyada kale ee kooxdiisu fasax u galeen kulamada caalamiga ah, waxaanay halkaas iska heleen Lionel Messi oo isaguna si ku-meelgaadh ah uga fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah.
Kulankan oo ku soo beegmay xilli Pogba aanu ku faraxsanayn Manchester United iyo Tababare Jose Mourinho oo uu hore ugu hanjabay inuu ka tegi doono bisha January ee foodda inaga soo haysa, ayaan la ogeyn in uu Messi kala xaajoonayo sidii uu u iman lahaa Camp Nou iyo waliba sida ay usoo dhaweyn doonaan.
Pogba ayaa bishii September xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhaxaysa Jose Mourinho, waxa uu mar kale sheegay inuu qandaraas kula jiro Manchester oo uu xilligan u ciyaaro, laakiin wuxuu si shaki leh u sheegay in aanu mustaqbalka ogeyn sida wax noqon doonaan.
“Mustaqbalkayga xilligan waa Manchester oo aan heshiis kula jiro haddana u ciyaarayo, laakiin yaa garan kara waxa dhacaya mustaqbalka iyo bilaha soo socda.” Ayuu Pogba yidhi bishii September.
Si kastaba ha ahaatee, muuqaallo laga duubay labadan ciyaartoy oo ku cawaynaya hotel laga cunteeyo oo Dubai ku yaalla ayaa waxa laga maqlayaa hadallo kaftan ah oo ay isweydaarsanayaan Pogba iyo Messi, kuwaas oo muujinaya sida ay iskugu dhow yihiin.